ဘုရားသခင့်အမျက်တော် - ဆွစ်ဇာလန်ရှိကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဘုရားကျောင်း
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2021-03 > ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်
သမ္မာကျမ်းစာတွင် “ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏” ဟု ရေးထားသည်။1. ဂျိုဟန် 4,8). Er hat beschlossen, Gutes zu tun, indem er den Menschen dient und sie liebt. Aber ebenso weist die Bibel auf Gottes Zorn hin. Doch wie kann derjenige, der reine Liebe ist, auch etwas mit Zorn zu tun haben?
အချစ်နှင့်ဒေါသသည်အပြန်အလှန်သီးသန့်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်လိုသောဆန္ဒ၌နာကျင်စေသော၊ ပျက်စီးစေသောအရာမှန်သမျှ၌ဒေါသသို့မဟုတ်ခုခံနိုင်စွမ်းလည်းပါဝင်သည်။ ဘုရားသခင့်မေတ္တာသည်တသမတ်တည်းရှိသောကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သူ၏မေတ္တာကိုဆန့်ကျင်သောအရာမှန်သမျှကိုခုခံသည်။ သူ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဆန့်ကျင်တဲ့အပြစ်မှန်သမျှသည်အပြစ်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်အပြစ်ကိုဆန့်ကျင်သည် - သူသည်၎င်းကိုတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်ကလူတွေကိုချစ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကအပြစ်မကြိုက်ဘူး။ သို့သော်“ မကျေမနပ်” သည်ထားရန်အလွန်ပျော့ညံ့သည်။ ဘုရားသခင်သည်အပြစ်ကိုမုန်းတီးသောကြောင့်၎င်းသည်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရန်လိုမုန်းတီးမှုပြသည့်သဘောဖြစ်သည်။ ဒါကသမ္မာကျမ်းစာအရဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်ဒေါသရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေတယ်။
အချို့ကျမ်းချက်များကဘုရားသခင်သည်လူတို့ကိုဒေါသထွက်ကြောင်းပြသည်။ ဒါပေမယ့်ဘုရားသခင်ကလူတွေကိုနာကျင်စေလိုတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့အပြစ်ရှိတဲ့နည်းလမ်းကသူတို့နဲ့သူတို့ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဘယ်လိုထိခိုက်စေလဲဆိုတာသူတို့ကိုမြင်စေချင်တယ်။ ဘုရားသခင်ကအပြစ်သားတွေကိုအပြစ်ဖြစ်စေတဲ့နာကျင်မှုကိုရှောင်ရှားဖို့ပြောင်းလဲစေချင်တယ်။
လူသားများ၏အပြစ်ပြုခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်တိုက်ခိုက်သောအခါဘုရားသခင်၏အမျက်သည်ပြသည်။ ဘုရားသခင်နှင့်မခြားသူတို့၏ဘ ၀ ကိုနေထိုင်သောသူများသည်သူ၏လမ်းစဉ်ကိုရန်လိုကြသည်။ ဤကဲ့သို့ဝေးကွာပြီးရန်လိုသောလူများသည်ဘုရားသခင်၏ရန်သူများအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ လူသားသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်သည့်ကောင်းမြတ်သန့်ရှင်းသောအရာအားလုံးကိုခြိမ်းခြောက်သောကြောင့်ဘုရားသခင်သည်အပြစ်၏လမ်းစဉ်နှင့်အလေ့အကျင့်များကိုပြတ်ပြတ်သားသားဆန့်ကျင်သည်။ သူ၏အပြစ်များနှင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုဆန့်ကျင်သောသူ၏သန့်ရှင်းသောမေတ္တာနှင့်ခုခံမှုကို“ ဘုရားသခင်အမျက်တော်” ဟုခေါ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်အပြစ်ကင်းသည်၊ သူသည်သူ့ကိုယ်သူနှင့်လုံးဝဥဿုံသန့်ရှင်းသူဖြစ်သည်။ သူသည်လူ၏အပြစ်ကိုမဆန့်ကျင်လျှင်သူသည်ကောင်းမည်မဟုတ်။ သူသည်အပြစ်ကိုစိတ်ဆိုးခြင်းမရှိလျှင်အပြစ်ကိုမစီရင်လျှင်ဘုရားသခင်သည်အပြစ်ရှိခြင်းသည်လုံးဝမကောင်းသောမကောင်းမှုကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ အပြစ်ရှိခြင်းသည်လုံးဝမကောင်းသောကြောင့်၎င်းသည်မုသာဝါဒဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ဘုရားသခင်သည်မလိမ်မညာနိုင်ဘဲ၊ သန့်ရှင်း။ ချစ်မြတ်နိုးသောသူ၏အတွင်းအကျဆုံးဖြစ်တည်မှုနှင့်အညီ၊ မကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆင်းရဲဒုက္ခအားလုံးကိုလောကမှဖယ်ရှားတော်မူသောကြောင့်ဘုရားသခင်သည်အပြစ်ကိုခုခံသည်။
Gott hat jedoch bereits die notwendigen Massnahmen angewandt, um die Feindschaft zwischen sich und der Sünde der Menschheit zu beenden. Diese Massnahmen fliessen aus seiner Liebe, die die Essenz seines Wesens ist: «Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist die Liebe» (1. ဂျိုဟန် 4,8). Aus Liebe erlaubt Gott seinen Geschöpfen, sich für oder gegen ihn zu entscheiden. Er erlaubt ihnen sogar, ihn zu hassen, obwohl er sich einer solchen Entscheidung widersetzt, weil sie den Menschen, die er liebt, schadet. In der Tat sagt er «Nein» zu ihrem «Nein». Indem er «Nein» zu unserem «Nein» sagt, bekräftigt er sein «Ja» zu uns in Jesus Christus. «Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingebornen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsre Sünden» (1. ဂျိုဟန် 4,9-10) ။
ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်။ ဖျက်သိမ်းရန်လိုအပ်သောခြေလှမ်းအားလုံးကိုသူကိုယ်တိုင်အမြင့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယေရှုသည်ငါတို့အဘို့အသေခံတော်မူသည်။ ငါတို့ရဲ့ခွင့်လွှတ်မှုအတွက်သူသေဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကငါတို့ရဲ့အပြစ်နဲ့အပြစ်ကိုအလေးအနက်ထားပြီးအပြစ်ကငါတို့အပေါ်မှာဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေကိုပြပါတယ်။ ဘုရားသခင်သည်သေစေသောအပြစ်ကိုမုန်းသည်။
Gottes Absicht bestand von Anfang an darin, den Menschen seine Liebe zu erweisen, indem er der Welt ihre Sünde durch das Werk Gottes in Jesus vergab (aus Epheser 1,3-8). Aufschlussreich ist die Situation der Menschen in ihrem Verhältnis zu Gott. Welchen «Zorn» Gott auch immer hatte, plante er auch, die Menschen zu erlösen, noch bevor die Welt erschaffen wurde «Sondern erlöst mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen» (1. ဓာတ်ဆီ 1,19-20). Diese Versöhnung kommt nicht durch menschliche Wünsche oder Bemühungen zustande, sondern allein durch die Person und das Erlösungswerk Jesu Christi stellvertretend für uns. Dieses Erlösungswerk wurde als «liebender Zorn» gegen die Sündhaftigkeit und für uns als Individuen vollbracht. Menschen, die «in Christus» sind, sind nicht länger Objekte des Zorns, sondern leben in Frieden mit Gott.
In Christus sind wir Menschen vor dem Zorn Gottes gerettet. Durch sein Erlösungswerk und den uns innewohnenden Heiligen Geist werden wir tiefgreifend verändert. Gott hat uns mit sich selbst versöhnt (aus 2. ကောရိန္သု 5,18); er hegt nicht den Wunsch, uns zu bestrafen, denn Jesus trug unsere Strafe. Wir danken und empfangen seine Vergebung und neues Leben in einer echten Beziehung zu ihm, indem wir uns Gott zuwenden und uns von allem abwenden, was ein Götze im menschlichen Leben ist. «Habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust; wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit» (1. ဂျိုဟန် 2,15-17). Unser Heil ist Gottes Rettung in Christus – «der uns errettet von dem zukünftigen Zorn» (1. သက် 1,10).
Der Mensch ist durch die Natur Adams zum Feind Gottes geworden, und diese Feindseligkeit und dieses Misstrauen gegenüber Gott bewirkt eine notwendige Gegenmassnahme des heiligen und liebenden Gottes – seinen Zorn. Schon von Anfang an hatte Gott aus seiner Liebe heraus beabsichtigt, den von Menschen verursachten Zorn durch das Erlösungswerk Christi zu beenden. Es geschieht durch Gottes Liebe, dass wir durch sein eigenes Erlösungswerk im Tod und Leben seines Sohnes mit ihm versöhnt wurden. «Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind» (Römer 5,9-10) ။
ဘုရားသခင်သည်လူသားများအပေါ်သူ၏ဖြောင့်မတ်သောအမျက်ကိုဖယ်ရှားရန်စီစဉ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်ဟာလူသားတွေရဲ့ဒေါသနဲ့မယှဉ်နိုင်ပါဘူး။ လူသားဘာသာစကားသည်ဤယာယီအမျိုးအစားအတွက်စကားလုံးမရှိပါ သူတို့သည်အပြစ်ဒဏ်ကိုခံထိုက်သည်၊ သို့သော်ဘုရားသခင်၏ဆန္ဒသည်သူတို့ကိုအပြစ်ပေးရန်မဟုတ်ဘဲသူတို့၏အပြစ်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောနာကျင်မှုများမှသူတို့ကိုကယ်လွှတ်ရန်ဖြစ်သည်။
Das Wort Zorn kann uns helfen zu verstehen, wie sehr Gott die Sünde hasst. Unser Verständnis des Wortes Zorn muss immer die Tatsache einschliessen, dass Gottes Zorn sich immer gegen die Sünde richtet, nie gegen die Menschen, weil er sie alle liebt. Gott hat bereits gehandelt, um seinen Zorn gegenüber den Menschen als beendet zu sehen. Sein Zorn gegen die Sünde endet dann, wenn die Auswirkungen der Sünde vernichtet sind. «Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod» (1. ကောရိန္သု ၁5,26).
အပြစ်များကိုသိမ်းပိုက်ပြီးဖျက်ဆီးသောအခါသူ၏ဒေါသသည်ရပ်သွားပြီးဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သူသည်ခရစ်တော်၌အပြစ်တရားကိုတစ်ကြိမ်နှင့်တစ်ကြိမ်အနိုင်ယူခဲ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သူ၏ငြိမ်းချမ်းရေးကတိတော်၌အာမခံချက်ရှိသည်။ ဘုရားသခင်သည်သားတော်၏ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုအားဖြင့်ငါတို့ကိုသူ့အားပြန်လည်သင့်မြတ်စေပြီး၊ သူ၏အမျက်ဒေါသကိုငြိမ်သက်စေသည်။ ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဟာသူ့ရဲ့မေတ္တာကိုဆန့်ကျင်တာမဟုတ်ဘူး။ ယင်းအစားသူ၏ဒေါသသည်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖြစ်စေသည်။ သူ၏ဒေါသသည်လူတိုင်းအတွက်မေတ္တာရည်ရွယ်ချက်များအောင်မြင်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
«Der Herr verstösst nicht ewig; sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner grossen Güte. Denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. … Was murren denn die Leute im Leben, ein jeder über die Folgen seiner Sünde?» (Klagelieder 3,31-33.39) ။
«Der Herr verzögert nicht die Verheissung, wie es einige für eine Verzögerung halten; sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Busse finde» (2. ဓာတ်ဆီ 3,9).
«Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe; wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe» (1. ဂျိုဟန် 4,17 letzter Teil-18).